शिक्षण अस्पतालको बैंक खाताबाट साढे १६ करोड गायब! spacekhabar
शिक्षण अस्पतालको बैंक खाताबाट साढे १६ करोड गायब!
स्पेसखबर काठमाडौं, ५ साउन
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको बैंक खाताबाटै साढे १६ करोड रुपैयाँ हराएको तथ्य खुलेको छ।महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।
महालेखाका अनुसार अस्पतालको बैंक नगदी किताबले २०७६ असार मसान्तसम्ममा (मार्गस्थ र नगद ३ लाख रुपैयाँबाहेक) ९८ करोड २७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बैंक मौज्दात देखाएको थियो।
सो मितिको बैंक स्टेटमेन्टअनुसार भने ८१ करोड ८३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ। तर बैंकमा भने १६ करोड ४४ लाख ८ हजार रुपैयाँ घटी देखिएको छ। घटी देखिएको रकमका सम्बन्धमा छानबिन गरी बैंकमा जम्मा हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन ग्लोबल बैंकमा २ करोड ६४ लाख ३८ हजार ऋणात्मक मौज्दात देखाएकोमा बैंक विवरण प्राप्त नभएकाले स्थिति जानकारी हुन नसकेको जनाइएको छ। अस्पतालले भने ग्लोबलमा बैंकिङ कारोबार नगरिएको बताएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सो अस्पतालको नेपाल बैंकमा पाँच खाता, नबिल बैंकमा एक खाता र हिमालयन बैंकको एक खाता (राहत खाता) मा अस्पतालको स्रेस्ताअनुसार १ करोड ६२ लाख २० हजार मौज्दात थियो।
तर, बैंकमा ११ लाख ७० हजार मात्र मौज्दात देखिएको छ। बैंकमा घटी मौज्दात देखिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी उक्त रकम प्राप्त हुनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको हो ।
यसैगरी अस्पतालले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम भुक्तानीमा कर कट्टा गर्नुपर्नेमा ६ करोड ४१ लाख १ हजार रुपैयाँ कट्टी गरेको कर रकम दाखिला नगरी दायित्व देखाएको छ। उक्त रकम राजस्व खातामा दाखिला हुनुपर्ने महालेखाको भनाई छ ।साभार :निउजअफ नेपाल डटकम
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ५, २०७७, ०१:५४:००